isikolo - ALinks
January 10, 2022 UKaruna Chandna Irakh, isikolo
Inkqubo yeMfundo yase-Iraq ilawulwa ngurhulumente welizwe wase-Iraq. Le mfundo karhulumente inikezelwa simahla ukusuka kwiPrayimari ukuya kwizidanga zobuGqirha. Amaziko emfundo yabucala akhona kwaye iindleko zezikolo ziwenza angabinamtsalane kubemi abaninzi. Eyona
Inkqubo yemfundo e-Afghanistan. Uluhlu lwezikolo zamazwe ngamazwe eKabul
January 10, 2022 UMaitri Jha Afghanistani , isikolo
Ukuba uceba ukufudukela eAfghanistan nosapho lwakho kunokuba kufuneka ujonge inkqubo yemfundo yaseAfghanistan. Kweli nqaku, siza kuxubusha inkqubo yesikolo nemfundo e-Afghanistan. I-Afghanistan iphakathi kwamazwe anayo
Sisebenza njani isikolo eOstreliya? Inkqubo yemfundo eOstreliya
January 7, 2022 UAntika Kumari Ostreliya, isikolo
Ukufundela eOstreliya yeyona ndlela ibalaseleyo yokuqhubela phambili imfundo kunye nomsebenzi wakho. Inkqubo yeSikolo kunye neMfundo eOstreliya ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda zabafundi bamazwe aphesheya. Sisebenza njani isikolo eOstreliya? Inkqubo yemfundo yaseOstreliya
Inkqubo yesikolo eItali
January 7, 2022 UMaitri Jha ElamaTaliyane, isikolo
Ukufudukela e-Italiya nosapho kunokuba kufuneka ube nomdla wokwazi inkqubo yesikolo yase-Italiya. IZikolo zikaRhulumente zase-Italiya zisimahla kuye wonke umntwana ohlala e-Itali. E-Italiya, kukho inkqubo yesikolo sikarhulumente, ekwabizwa ngokuba yi
Injani inkqubo yemfundo eMalaysia?
January 7, 2022 UAntika Kumari Maleyishiya, isikolo
Ukuba ufudukela eMalaysia nosapho lwakho. Kwimeko apho, eyona nto uyixhalabeleyo yimfundo yabantwana bakho. Kodwa, inkqubo yemfundo eMalaysia ikumgangatho ophezulu. Kananjalo, bonke abazali ababesakuba ngabathathi-nxaxheba babengasokoli kakhulu
Izikolo kunye nenkqubo yemfundo eMexico
January 6, 2022 UAntika Kumari Mekhsikho, isikolo
Ukuba ufudukela eMexico nentsapho yakho, isigqibo esibalulekileyo omele ujamelane naso sesokuba ungaqhubeka njani nemfundo yabantwana bakho. Isikolo neNkqubo yeMfundo eMexico isenokungabi naso esona sikolo sinamandla sikhoyo. Kodwa kukho iintlobo ngeentlobo
Inkqubo yesikolo eTshayina
January 4, 2022 UAntika Kumari iTshayina, isikolo
I-China, eyaziwa ngokuba yiRiphabhlikhi yaseTshayina, lilizwe eliseMpuma Asia. I-China inabemi abaninzi emhlabeni kunye nelizwe lesine ngobukhulu. Inkqubo yezikolo yeli lizwe ikwangomnye wamazwe aphambili. I
Inkqubo yezeMfundo ye-UAE. Izikolo ezikwi-United Arab Emirates
January 4, 2022 UAntika Kumari isikolo, UAE
Inkqubo yezeMfundo kwi-UAE yenze imfundo isinyanzelo kubo bonke abantwana base-Emiratis abaneminyaka emihlanu nangaphezulu, kubandakanywa nabahlali abaphuma kumazwe angaphandle. Imfundo yaseprayimari kunye nemfundo yamabanga aphakamileyo kumaziko anikezelwa simahla kulo lonke ilizwe lase-UAE ukuya kuthi ga kwiminyaka eyi-18.
Yintoni inkqubo yesikolo eCanada?
Disemba 16, 2021 UAntika Kumari Khanada, isikolo
ICanada lelinye lawona mazwe afunde kakhulu ehlabathini. Ngo-2015, i-90 % yabantu baseKhanada abaneminyaka engama-25 ukuya kwengama-64 baye bagqiba isikolo sabo samabanga aphakamileyo, kwaye i-66% ifumene imfundo yamabanga aphakamileyo. ICanada inamandla,